I-Google isivele inikeze idethi yokuphela kokuhambisana kwenguqulo 2 ye-Chrome Manifest | Kusuka kuLinux
I-Google isivele inikeze idethi yokuphela kokuhambisana kwenguqulo 2 ye-Chrome Manifest
Okuhle | 24/09/2021 19:53 | Izaziso
IGoogle ikhiphe umugqa wesikhathi lapho ichaza khona ukuthi kanjani Ukuphela kokusekelwa kwenguqulo 2 kuzokwenzeka kusuka ku-Chrome expression yayo ngokuvumelana nohlobo 3, olubhekiswe ekuphazamiseni ama-plugins alo amaningi okuphepha nokuvimba okuqukethwe okungafanelekile.
Ngaphezu kokufaka inguqulo yesibili ye-manifest, i-block blocker edumile uBlock Origin ixhunyiwe, engakwazi ukudluliselwa kunguqulo yesithathu ye-manifest ngenxa yokuphela kokusekelwa kwemodi yokuvimba ye-webRequest API.
Kusukela ngoJanuwari 17, 2022, ama-plugins asebenzisa inguqulo yesibili ye-manifest ngeke esamukelwa ku-Chrome Web Store, kepha onjiniyela be-plugin abangezwe ngaphambilini basazokwazi ukuthumela izibuyekezo.
NgoJanuwari 2023, i-Chrome izoyeka ukusebenzisana nenguqulo yesibili ye-manifest nawo wonke ama-plugins axhumeke kuyo azoyeka ukusebenza. Ngasikhathi sinye, ukuthumela izibuyekezo zalezo zengezo ku-Chrome Web Store kuzovinjelwa.
Ngasekuqaleni konyaka, nge-Chrome 88, simemezele ukutholakala kwenguqulo entsha ye-manifest yohlelo lwezandiso lwe-Chrome. Iminyaka ekwenzeni, iManifest V3 iphephe kakhulu, isebenza kahle, futhi igcina ubumfihlo kunangaphambi kwayo. Kungukuvela kwepulatifomu yesandiso ebheka kokubili ukuguquguquka kwewebhu kanye nekusasa lezandiso zesiphequluli.
Njengoba sibheke esikhathini esizayo futhi siqhubeka nokunciphisa futhi sithuthukisa ukusebenza kweManifest V3, sifuna nokwabelana ngemininingwane ngohlelo lokuqeda izandiso kwiManifest V2.
Kumele sikukhumbule lokho inguqulo yesithathu ye-manifest, echaza amandla nezinsizakusebenza ukunikezwa ama-plugins, njengengxenye yesinyathelo sokuqinisa ezokuphepha nobumfihlo, kunokuba i-webRequest API, i-declarativeNetRequest API, enamandla amancane, kuhlongozwa.
Ngenkathi i I-WebRequest API ikuvumela ukuthi uxhume abalawuli bakho abanokufinyelela okugcwele kwezicelo zenethiwekhi futhi abangaguqula ithrafikhi endizeni, i-declarativeNetRequest API inikeza kuphela ukufinyelela enjini yokuhlunga isilungele ukusetshenziswa esakhelwe esipheqululini esiphatha imithetho yokuvimba yodwa. , engakuvumeli ukuthi usebenzise ama-algorithms akho wokuhlunga futhi ayikuvumeli ukuthi usethe imithetho eyinkimbinkimbi eyeqanayo ngokuya ngezimo.
Njengoba lezi zinsuku zisondela, sizokwabelana ngemininingwane eminingi ngohlobo lwe-Chrome oluhloselwe ushintsho, kanye nemininingwane eminingi yokuthi onjiniyela bezandiso nabasebenzisi bangathinteka kanjani.
Okwamanje, sizoqhubeka nokwengeza amakhono amasha ku-Manifest V3 ngokuya ngezidingo namazwi omphakathi wethu wonjiniyela. Ngisho nasezinyangeni ezimbalwa ezedlule, kube nezandiso eziningi ezithokozisayo epulatifomu yokwelulwa
Ngokuya nge-Google, iyaqhubeka nokusebenza ekusebenziseni amandla we-NetRequest wokumemezela adingekayo kuma-plugins asebenzisa i-webRequest, futhi ihlose ukuletha i-API entsha kwifomethi ehlangabezana ngokugcwele nezidingo zabathuthukisi be-plugin abakhona.
Ezinyangeni ezizayo, sizokwethula futhi ukwesekwa kwezikripthi zokuqukethwe okulungisekayo okunamandla nenketho yokugcina inkumbulo, phakathi kwamanye amakhono amasha. Lezi zinguquko zenzelwe ukucabanga ngempendulo yomphakathi, futhi sizoqhubeka nokwakha ukusebenza okunamandla kakhulu kwe-Extension API njengoba imininingwane eminingi yabiwa ngonjiniyela.
Isibonelo, iGoogle isivele icabangele izifiso zomphakathi futhi yengeza ukusekelwa kwe-declarativeNetRequest API yamasethi wemithetho eminingi ye-static, ukuhlunga kwe-regex, ukuguqulwa kwamaheda we-HTTP, ukuguqula nokufaka imithetho ngamandla, kususwe futhi kufakwe eminye imingcele. Isicelo, ukuhlunga ithebhu , nomthetho oqondene neseshini usetha ukudala.
Ezinyangeni ezizayo, kuhlelwe ukuthi kuqhutshekwe kwenziwe ukwesekwa kwemibhalo eguquguqukayo eyenziwe ngokwezifiso yokucubungula okuqukethwe kanye nekhono lokugcina idatha ku-RAM.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Google isivele inikeze idethi yokuphela kokuhambisana kwenguqulo 2 ye-Chrome Manifest
I-Cloud Computing: Izicelo Namanje Zomthombo Ovulekile Wamanje